Fitsarana eropeana: tsy manitsakitsaka ny zon'olombelona ny fanaovana vaksiny faneriterena
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Fitsarana eropeana: tsy manitsakitsaka ny zon'olombelona ny fanaovana vaksiny faneriterena
Fitsarana eropeana: tsy manitsakitsaka ny zon'olombelona ny fanaovana vaksiny mandatory
Ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia manamafy ny mety hisian'ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao ao anatin'ny fepetra aretin-tratran'ny COVID-19 ankehitriny
Ny fanaovana vaksiny ny ankizy noho ny aretina mahazatra dia tombotsoany
Ny fepetra dia azo raisina ho 'ilaina amin'ny fiarahamonina demokratika'
Ny tanjona dia ny hiarovana ny zaza rehetra amin'ny aretina lehibe
Tamin'ny fanapahan-kevitra lehibe iray androany, ny Fitsarana Eoropeana misahana ny zon'olombelona (ECHR) dia nanapa-kevitra fa ny fanaovana vaksinin'ny ankizy amin'ny aretina iraisana dia tombontsoany ary "ilaina amin'ny fiarahamonina demokratika '.
Raha ny filazan'ny manampahaizana manokana momba ny lalàna manokana Fitsarana Eoropeanina momba ny zon'olombelona ny fanapaha-kevitra, ny fanapahan-kevitry ny fitsarana dia manamafy ny mety hisian'ny fanaovana vaksiny fanerena amin'ny fepetra aretin-tratran'ny COVID-19 ankehitriny.
Ity no fotoana voalohany nanapahan'ny ECHR ny vaksiny tsy maintsy atao ho an'ny ankizy manohitra aretina mahazatra. Raha nifampiraharaha tamin'ny lalànan'ny Repoblika Tseky izay mitaky ny fananan'ireo ankizy mianatra tsy ho voan'ny aretina toy ny kohaka, tetanosy ary kitrotro ny didim-pitsarana, dia misy fiantraikany amin'ny resaka COVID-19 tsy maintsy atao.
"Ny… fepetra azo raisina ho 'ilaina amin'ny fiarahamonina demokratika," ny fanapaha-kevitra noraisin'ny fitsarana dia manohitra ny mpanohitra vaxxers.
"Ny tanjona dia ny hiarovana ny zaza rehetra amin'ny aretina mafy", hoy ny fitsarana tamin'ny didim-pitsarany.
Notsipahan'ny mpitsara ny antso izay natolotry ny teratany Czech enina izay nampandoavina onitra noho ny tsy fanarahan'izy ireo ny lalàna momba ny vaksiny tsy maintsy atao na ny zanany tsy navela hiditra amin'ny sekolin-jazakely noho io antony io ihany. Nilaza ny ray aman-dreny fa manitsakitsaka ny zon'olombelona ny lalàna mifehy ny jab.
Nilaza ny tribonaly fa na dia nametraka olana mafampana aza ny fanaovana vaksiny tsy maintsy atao, ny lanjan'ny firaisankina ara-tsosialy hiarovana ny fahasalaman'ny mpikambana rehetra ao amin'ny fiarahamonina, indrindra ireo izay marefo indrindra, dia nitaky ny hamoahana ny risika farany ambany amin'ny alàlan'ny jabs.
Velona ny fiainana Disney Wish ny Disney Cruise Line